အသွင်အပြင်ဆန်းဆန်းအရသာလန်းလန်း Ice Cream လေးတွေသုံးဆောင်နိုင်မယ့်…………. – FoodiesNavi
ချိုချိုဆိမ့်ဆိမ့်အရသာလေးကိုမှ ??? စွဲမက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Foodies တို့အတွက် Foodies Navi ကနေ Ice Cream Bar နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ စတော်ဘယ်ရီအရသာ ၊ ချောကလက်အရသာစတဲ့အရသာတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ရေခဲမုန့်တွေဟာ ??? စားရတာအရမ်းကိုရိုးရှင်းအိုဟောင်းနေပြီနော်။ ဒီတော့သစ်သစ်ဆန်းဆန်း ရေခဲမုန့်အရသာအလန်းလေးတွေကို သုံးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် Ice Cream Bar ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ????
Ice Cream Bar ရဲ့လိပ်စာတွေကတော့ –? ?
-Corner of 14th Street & Mahabandoola Road , Lanmadaw.
-3rd floor , Junction Square Center .
-4th floor , Junction Martin Center .
-2nd floor , Junction Zawana Center .
-Ground floor , City Mart Tamine Center .
Ice Cream Bar မှာဆိုရင် Waffle , Toast , Pancake , Crepe ဆိုပြီးအဓိကအမျိုးအစား(၄)မျိုး ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ??? ဒီအမျိုးအစားတွေကမှ Signature Waffles အနေနဲ့ကတော့ Warm Waffle with Ice Cream(chocolate/strawberry/honey syrup) , Babnana Split Waffle , Fruity Waffle Ice Cream , Cheesy Waffle , Honey Waffle , Cookie & Cream Waffle , Single Classic Waffle တွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ??? Toasts အနေနဲ့ကတော့ Honey Toast with Ice Cream , Fruity Toast , Chocolate Toast , Cheesy Toast , Nutella Toast , Kara Toast , Eggy Toast တွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ??? Crepes & Pancakes အနေနဲ့ကတော့ Fruity Crepe , Chocolate Crepe , Nutellaa Crepe , Choco-Alamond Pancake , Banana Crepe Roll with Caramel Sauce တွေရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ??? Signature Desserts အနေနဲ့ကတော့ Fancy Cone , Affogato , Hot Fudge Brownie တွေကိုရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???
Menu နာမည်လေးတွေဆန်းသလို အရသာတွေကလည်းအရမ်းလန်းတယ်နော်။ ??? လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းတဲ့ အစားအစာပြင်ဆင်မှုတွေကြောင့် စိတ်ချမ်းသာရသလို ဆိုင်အတွင်း Decoration တွေရဲ့ခန့်ညားသပ်ရပ်မှုတွေကြောင့် စိတ်ကျေနပ်စေပါတယ်။ ??? အရသာဆန်းဆန်းလေးတွေကို ပေါင်းစပ်မှုအသစ်သစ်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် Foodies တို့အကြိုက်တွေ့မှာအသေအချာပါပဲနော်။ ?‍?‍?‍? မိသားစုနဲ့ပဲသွားသွား ၊ ?? သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပဲသွားသွား ၊ ?‍❤️‍??‍❤️‍? ချစ်သူတွေနဲ့ပဲသွားသွား အေးအေးဆေးဆေးသုံးဆောင်လို့ရမယ့် နေရာလေးပါနော်။ နေ့စဉ်မနက်(၉)နာရီကနေ ည(၁၀)ထိဆိုင်ဖွင့်တာမို့ Foodies တို့အားတဲ့အချိန်သွားစားကြည့်ဖို့ လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ???
Image Source : www.facebook.com/icecreambar
In Restaurant Guides Tagged crepe, pancake, toast, waffle Leaveacomment